Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Inxalenye ebangel kwamanye amazwe na Ukungaqiniseki amava. Xa ukuya kwilizwe lasemzini, uya baboniswa kwiinkcubeko ezahlukeneyo, izilungiselelo, kunye namava. Nokuba wenze uphando, you are sure to be taken by surprise by some…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Le polemic kulo loliwe xa kuthelekiswa ibhasi eYurophu sisihloko uphelayo, wonke Imelwe izimvo zabo. kodwa, Ingaba nokuba sithetha ngokhuseleko, kwaye ukuba ngaba - ngaba kwanele? Ukhuseleko zokuhamba yethu abanyulwa kufuneka njalo ukufika kuqala, and we’re addressing…